N'ihi na EBIDO ma ọ bụ ndị ọrụ ndị ọzọ adịkwa egweri biini si desktọọpụ nwere ike ime ka ụjọ. Otú ọ dị, ọ bụ ihe kwesịrị na-akwụsị egweri biini ma kasị bụrụ dịruru ná njọ na-adịkwa oké ọnụ ahịa faịlụ. E nwere ole na ole na-eme nke pụrụ iduga ida nke egweri biini na faịlụ na egweri biini. Mgbe ị chọrọ a dị ọcha na desktọọpụ, ị nwere ike mmadụ na mberede wepụ egweri biini si desktọọpụ si otú ahụ na akara ngosi ga-ezo. Ọzọkwa, mgbe ihichapụ ụfọdụ na-enweghị isi faịlụ site na egweri biini, ị nwere ike ihichapụ ụfọdụ dị mkpa faịlụ nanị na-aghọta mbubreyo. Na ndị ọzọ na oge, a rụrụ arụ sistemụ pụrụ iduga ida nke faịlụ na egweri.
Ọzọ ihe, na egweri biini icon nwere ike weghachiri eweghachi azụ ka desktọọpụ. Ọzọkwa, nke furu efu faịlụ site na egweri biini ike ka a natara na ha mbụ n'ụdị ka ha gara aga ọnọdụ na iji ziri ezi data mgbake software.
Olee otú Mee egweri biini sinanfiputa na desktọọpụ
Gị egweri biini nwere ike akwụsị desktọọpụ ruru ka a ọnụ ọgụgụ nke ndị na-esonụ ihe. Ọ pụrụ ịbụ n'ihi na a virus, Aftermarket ọcha ngwá ọrụ nwere ike iwepu ya ma ọ bụ na mberede nhichapụ. Na-agba ume; ị nwere ike naghachi ya ya mbụ ọnọdụ. E nwere ọtụtụ ihe iji na-eso iji mee ka ọ sinanfiputa ọzọ.
Pịa na mmalite menu na ị ọrụ mmanya
Nke a bụ isi nzọụkwụ nke mmadụ n'otu n'otu na windows vista.
N'ihi na mmadụ n'otu n'otu na Windows 8 na Windows 7, ị ga-achọrọ ịchọ desktọọpụ oyiyi ahụ na-aga n'ihu iji họrọ show ma ọ bụ zoo nkịtị aịkọn na desktọọpụ. E nwere mgbe unu ga-anọgide na nzọụkwụ 4
Họrọ akara panel
E nwere akara panel on nri gị, pịa ya na-eche maka ndị ọzọ na atụmatụ na-egosipụta. Ị ga-ahụ dị ka nke a na-egosi.
Site ọdịdị na Personalization, na-aga hazie na gị ziri ezi. Ị ga-enyocha dị ka nke a na-egosi na kọmputa gị.
Gaa ịgbanwe desktọọpụ oyiyi
A mkparịta ụka igbe ga-egosi na gị n'aka nri gị n'akụkụ. Ị ga-ahụ mgbanwe desktọọpụ icon egosi, pịa ya.
Họrọ egweri biini
Gaa ịgbanwe desktọọpụ icon igbe wee họrọ egweri biini tinye gị na desktọọpụ nke gị nhọrọ. Ebe ị ga-ahụ a na ihuenyo dị ka nke a
Ị nwere ike ma na-ahọrọ a zuru egweri biini ma ọ bụ ihe efu otu. E nwekwara mgbanwe egweri biini icon mkparịta ụka igbe nnọọ bụrụ na ị na-adịghị amasị gara aga akara ngosi.
Olee otú Recovers ehichapụ faịlụ site na egweri biini
Ọ bụrụ na ị na mberede ehichapụ mkpa faịlụ, e nwere ghara ime ka n'ihi mkpu. The egweri biini ka nwere gị faịlụ mere; ọ dị mfe ime ka ha dịghachi na window. Ma ọ bụrụ na ị gara ọzọ efu nke egweri biini, ị gaghị ahụ gị faịlụ na egweri biini otú ị ga-mkpa faịlụ mgbake software iji nweta ha azụ. Ebe a na-mfe nzọụkwụ iji weghachite ehichapụ faịlụ site na egweri na window
Mbụ, abụọ click na egweri biini akara imeghe. Mgbe ahụ mata na họrọ niile faịlụ gị mkpa ha weghachiri eweghachi. Mgbe ahụ, họrọ ihe kwesịrị ekwesị ebe ị chọrọ ka gị na weghachiri eweghachi faịlụ na-emi odude. Right pịa na ọnọdụ wee pịa weghachi. Izu Ike, ị faịlụ nwere ike ugbu a-eweghachi na ị ga-ahụ ha na ọnọdụ ị họrọ. Oge iwere iji weghachi faịlụ na-adabere na kọmputa gị ọsọ na size nke faịlụ a na-weghachiri eweghachi.
The Best Data Recovery Ngwá Ọrụ-Wondershare Data mgbake
Ndị mmadụ n'otu n'otu na ọbụna ụlọ ọrụ agwụ adịkwa mkpa data. Ugbu a, ọtụtụ ọmụma na-echekwara na kọmputa Otú ọ dị; ọmụma dị otú ahụ na-adịghị na-emekarị kwadoo. N'ihi ya ọnwụ nke ndị dị otú ahụ dị mkpa data nwere ike ime ka oké njọ egwu n'etiti ọrụ. Obibi dị otú ahụ ụdị ọnọdụ, a ọnụ ọgụgụ nke data mgbake ngwaọrụ e mepụtakwara. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe kasị oru oma na elu àgwà software, lee ọzọ.
Wondershare Data mgbake ngwá ọrụ bụ ihe dị egwu na ngwá ọrụ weghachite ụdị ọ bụla nke furu efu data. Site sekọndrị nchekwa ngwaọrụ (gụnyere na-ejedebeghị na ike draịva, flash draịva, SD kaadị) ka mobile ntị ka dijitalụ ese foto. Nke a software bụ onye ọrụ enyi na enyi na beginners ma ọ bụ na EBIDO nwere ike iji ya na-enweghị ike. Ọ na-nwere ezi interface-eme ka ọ dịkwuo mfe n'ihi na onye ọrụ ịnyagharịa mgbe ọ bụla mkpa.
Nke a mgbake software e mere na-eje ozi niile ọrụ ewere n'ime akaụntụ kọmputa nkà. Na e nwere ihe abụọ na ụdị nke mgbake ịba uru; Ọkachamara na ọkọlọtọ mode. Ọkachamara mode na-kpọmkwem haziri maka ndị mmadụ n'otu n'otu na-enweghị ọtụtụ kọmputa nkà naghachi furu efu data. Ọkọlọtọ mode a pụtara n'ihi na elu ọrụ. Ọ na e dere anọ mgbake modul; furu efu faịlụ mgbake, malitegharịa mgbake, nkebi mgbake na raw faịlụ mgbake.
Olee otú iji weghachite Data Iji Wondershare File Iweghachite Software
Họrọ ụdị faịlụ ị chọrọ iji naghachi
Ebe ị na-achọrọ iji họrọ ụdị nke faịlụ ị chọrọ ka a Ewepụtara ka ọ foto, ozi ịntanetị, audios ma ọ bụ video. I nwekwara ike họrọ ihe niile nhọrọ, ma ọ bụrụ na chọrọ niile furu efu faịlụ ka-natara. -Abịa okwu na ihe ị chọrọ gaba na-esonụ nzọụkwụ.
Họrọ ebe ebe ehichapụ faịlụ ebe ibido ehichapụ
N'oge a, họrọ ebe ị gara aga ehichapụ ihe. Họrọ egweri biini ọ bụrụ na ị bupụrụ ihe egweri. Ọ bụrụ na ị bụghị ụfọdụ ebe data ọnwụ mere, ị nwekwara ike ịhọrọ na kọmputa dị ka na ọnọdụ aka mgbake ngwá ọrụ iji weghachite gị faịlụ.
Wee họrọ ọzọ gaba ihe nzọụkwụ ọzọ.
Họrọ nwee miri Doppler
Kwado miri Doppler inye mgbake ngwá ọrụ ndị kasị elu na o kwere omume ohere nke na-agbake gị niile furu efu faịlụ. Usoro nwere ike buru ọtụtụ minit nyere ọnụ ọgụgụ nke faịlụ chọrọ ka scanned. Họrọ Malite na-amalite miri Doppler usoro.
Naghachi ehichapụ faịlụ
Mgbe scanning-agwụ agwụ, na-aga site niile natara ụdị nke faịlụ. Mgbe ahụ, pịa Doppler (na ego maka ihe ọ bụla dị ihe) na ịzọpụta. Miri scanning na o siri ike afiak okpu nditọ naghachi furu efu faịlụ. Ọ bụ ya mere miri scanning na-atụ aro.
Nweta gị onwe gị nke Wondershare Data Recovery ngwa taa iji zere ikpeazụ nkeji rosh na ụjọ mgbe oké mkpa data afiak okpu nditọ na gị na kọmputa.
Dane-Elec Data Recovery: Olee naghachi Data si Dane-Elec Nchekwa Devices
> Resource> Naghachi> The ụzọ kasị mma weghachi gị egweri biini